Sagaal askari Kenyan ah oo lagu dilay weerar ay qaadeen Shabaab. | XAL DOON
Home NEWS Sagaal askari Kenyan ah oo lagu dilay weerar ay qaadeen Shabaab.
Sagaal askari Kenyan ah oo lagu dilay weerar ay qaadeen Shabaab.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsaday oo Shabaab ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay wateen Ciidamada Kenya ee ilalaada ka haya xadka kala qeybiya dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Si gaar ah waxa uu weerarka uga dhacay Deegaanka Ceel-raam ee duleedka Degmada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya. Ciidanka la weeraray ayaa la sheegay in ay ku sii jeedeen dhinaca Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
Wararka la helayo waxa ay sheegayaan in Shabaab ay qoriga Baasuukayaasha ah ay ku garaaceen gaadiidka ay saarnaayeen Ciidamada Kenyanka, waxaana xigay dagaal fool ka fool ah oo halkaasi ka dhacay, kaasoo socday wax ku dhow saacad.
Kooxda Shabaab waxa ay sheegatay in weerarkaasi ay ku dishay Sagaal askari oo ka tirsan Ciidamada Kenya, sidoo kalena ay gubeen Afar kamid ah Kolonyadiid gaadiidka ee ay wateen Ciidamada Kenya ee wadada loo galay, Shabaabku ma sheegan khasaaraha dhankooda gaaray.
Majirto wali wax war ah oo dowladda Kenya ay ka soo saartay weerarkan iyo waxa ka jira sheegashada Kooxda Shabaab.